April 2015 | OKKALA STORE
ဇာတ်လမ်းကလည်း Inception လိုပဲ တွေးသသ ဖြစ်စေမယ့် ဇာတ်လမ်းမျိုးဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်တော်ဆို Review သေချာရေးဖို့အတွက်၂ခါလောက်ပြန် ကြည့်ခဲ့ရပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအစမှာ ကမ္ဘာကြီးက မြေဆီမြေသြဇာတွေ ကုန်ခမ်းလာပြီး အစားအသောက်ရှားပါးလာပါတယ်။ ဒီကြားထဲသဲမုန်တိုင်းကလည်း တိုက်လိုက်ပါသေးတယ်။ Cooper (Matthew McConaughey) က အရင်တုန်းက အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦး ဖြစ်သလို အာကာသ ယာဉ်မှုးတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ လယ်သမားအဖြစ်နဲ့ ပြောင်းခင်းတွေကို စိုက်ပျိုးနေရပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့တစ်နေ့မှာ NASA ရဲ့ အာကာသ စခန်းတစ်ခုကိုအမှတ်မထင်တွေ့သွားပြီး (ဘာလို့တွေ့သွားလည်းဆိုတာကို ရှင်းပြရင် Spoiler ဖြစ်နေလို့ Spoiler version ထပ်တင်ပေးမှ သေချာရေးပေးပါ့မယ်။) တစ်ခြားဂြိုလ်တွေကို သွားရှာမယ့် အစီအစဉ်ကို သိလိုက်ရပြီး သူ့ကို ပိုင်းလော့လုပ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုတာကို လက်ခံလိုက်ပါတယ်။
သိပ္ပံပညာရှင်တွေက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၅၀ ထဲက ကမ္ဘာပေါ်မှာ သံလိုက်စက်ကွင်းတွေ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ ဆွဲအား ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တာတွေကို သတိထားမိရာကနေ Saturn ဂြိုလ် (စနေဂြိုလ်) နားမှာ Black Hole တစ်ခု လာပွင့်နေတာကို တွေ့ရှိထားပါတယ်။ ဒီ Blackhole ကို တစ်ခြားဂြိုလ်သားတွေက လူတွေကို ကူညီဖို့ ဖန်တီးပေးထားဖြစ်ပြီး၊ NASA က ဒါကြောင့် အဲ့ဒီတုန်းကထဲက လေ့လာနေခဲ့ပြီး Drone တွေလွှတ်ကာ လူတွေနေထိုင်လို့ရလောက်မယ့်ဂြိုလ်တွေကို ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်ကျော်တုန်းက သိပ္ပံပညာရှင် ၁၃ ဦးကို ဂြိုလ်၁၃ ခုကို စေလွှတ်ခဲ့ပြီး လေ့လာစေခဲ့ပါတယ်။ တကယ်လို့ သူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာ လူနေလို့မရရင် သူတို့ကို ပြန်ကယ်နိုင်မှာမဟုတ်ပဲ အသေခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထဲကမှ ၃ယောက်က သတင်းပြန်ပို့လာပြီး သူတို့ပေးပို့တဲ့အချက်အလက်တွေက လည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် Cooper တို့အလုပ်က အဲ့ဒီ Planet သုံးလုံးကို သွားလေ့လာပြီး သတင်းပြန်ပို့ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ လူသားတွေကို ဘယ်လိုကယ်တင်မလည်းဆိုတော့ Professor Brand (Michael Caine) က Plan နှစ်ခုရှိကြောင်းရှင်းပြပါတယ်။ Plan A က Prof. Brand က fifth-dimensional physics နဲ့ဆိုင်တဲ့ Equation ကို ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားမှာဖြစ်ပြီး၊ ဒီ ပြသ၁နာကို အဖြေ ရှာနိုင်ခဲ့ရင် လူတွေ နားမလည်နိုင်တဲ့ Alien Physics ကို သဘောပေါက်နားလည်မှာဖြစ်ပြီး၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိသမျှလူတွေ အာကာသ စခန်းဆောက်ပြီး အာကာသထဲမှာ ထားနိုင်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ (Alien Physics ဆိုတာ Blackhole ဖွင့်တဲ့ နည်းပညာလိုမျိုး ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီး Saturn နားက Blackhole ကိုလေ့လာ ရာကနေ ရလာတဲ့ Equation ဖြစ်ပါတယ်။)
Plan B ကတော့ လူတွေတော်တော်များများရဲ့ မျိုးစိတ်တွေကနေ သန္ဓေတည်ထားတဲ့ မျိုးဥတွေကို စုထားပြီး Cooper တို့နဲ့ ယူသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့သာ Plan A မအောင်မြင်ခဲ့ရင် Cooper တို့က လူတွေနေလို့ရလောက်တဲ့ Planet မှာ အခြေချနေပြီး ဒီမျိုးဥတွေကနေ သားဖောက် လူတွေ မွေးပြီး လူသား မျိုးနွယ် မပျက်သုံးအောင် လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သားတစ်ယောက် သမီးတစ်ယောက်ရှိတဲ့ Cooper က Plan B ကို မကြိုက်ပေမယ့် Prof. Brand က Plan A အောင်မြင်မယ်လို့ အာမခံခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ သွားရမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှာဖြစ်ပြီး မင်းတို့ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ဆို ဒီ Equation ကိုဖြေရှင်းပြီးလောက်ပြီလို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ သူတို့အဖွဲ့ စတင်ထွက်ခွာတော့ Cooper ရဲ့ ၁၀ နှစ်သမီးလေးက အဖေကို မသွားစေချင်ခဲ့ပါဘူး။ အဖေ့ကိုလည်း လုံးဝမကြည်ပဲ Video message တောင်မပို့ခဲ့ပါဘူး။ ကမ္ဘာမြေကြီးကနေ Warmhole ရှိတဲ့ စနေဂြိုလ် ကိုအရောက်သွားဖို့တောင် ၁၈ လကြာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Cooper တို့အဖွဲ့က Underwater sleep လို့ခေါ်တဲ့ အနားယူချင်းပုံစံနဲ့ အိပ်နေခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုအိပ်စက်ခြင်းအားဖြင့် Computer တွေ Laptop တွေမှာ ပါတဲ့ Hibernation လို့ခေါ်တဲ့ အိပ်စက်ခြင်းမျိုးဖြစ်သွားပြီး၊ သူတို့ရဲ့ လက်ရှိအသက်အရွယ်၊ ကို ထိမ်းထားသလို၊ အစားအသောက်စားဖို့လည်းမလိုတော့ပါဘူး။
Cooper တို့အဖွဲ့ ကို Endurance လို့ခေါ်ပြီး Cooper နဲ့အတူ Prof. Brand ရဲ့သမီး biologist Amelia (Anne Hathaway), scientists Romilly (David Gyasi), Doyle (Wes Bentley) တိုနဲ့အတူ စက်ရုပ်နှစ်ရုပ်ဖြစ်တဲ့ robots TARS and CASE တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ Blackhole ကိုဖြတ်ပြီး ပထမဆုံး Planet ကိုသွားကြည့်တဲ့ အခါမှာ အခက်အခဲစကြုံလာပါတယ်။ ဒီဂြိုလ်က Warmhloe နဲ့နီးနေလို့ (အလွယ်တူရှင်းပြတာပါ။) ဆွဲအားအရမ်းများနေတဲ့အတွက် သူ့ဆီမှာ တစ်နာရီ နေရင် ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ အချိန် ၇နှစ်ကြာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ ဂြိုလ်ကနေ ပြန်လာ ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ၂၃ နှစ်ကြာသွားပြီဖြစ်သလို Cooper ရဲ့ သမီးက သူနဲ့ရွယ်တူဖြစ်နေ တာကို Video message ကနေ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဒီအပြင် သူတို့မှာ နောက်ထပ် ဂြိုလ်နှစ်ခုကို ဆက်သွားဖို့ လောင်စာအလုံလောက်မရှိတော့ပဲ (နှစ်ခုလုံးကိုသွားလို့ရပေမယ့် ကမ္ဘာပေါ်ကိုပြန်ဖို့ မလောက်တော့ပါဘူး။ Cooper ကသူ့သမီးကိုလည်း ကယ်ချင်သေးတာကြောင့်) တစ်ခုကိုပဲသွားနိုင်မှာဖြစ်လို့ ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပြီး မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်မလားဆိုတာတော့ ပရိတ်သတ်ကြီး ကိုယ်တိုင် ကြည့်ကြည့်ကြပါလို့ ပဲ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
သိပ္ပံပညာစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ Sci-Fi ကြိုက်တဲ့သူတွေ အကြိုက်တွေ့စေမှာဖြစ်ပြီး မိသားစုတူတူ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Interstellar Movie Download Link>>>> https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZBMWXZcVUDE6O3W15sfqNGYPgSwQyEu847
Posted by okkala net at 6:40 PM No comments: Links to this post
မင်းသမီး Michelle Yeoh .... ကိုရီးယားမင်းသား Jung Woo-sung တို့အပြင်
အခြားသောမင်းသား/မင်းသမီးတွေ ပါဝင်ထားတဲ့ တရုတ်သိုင်းကားဖြစ်ပါတယ်။
IMDb Rating (6.9/10) Rotten Tomatoes (70%) ရရှိထားလို့ Rating မြင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ။
၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်းထွက်ရှိခဲ့တဲ့ မီရှယ်လဲယို ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားလို့
သတ်မှတ်ခံထားရတာကြောင့် သိုင်းလောကသားတွေအတွက် လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ကြောင်းပါ။
ကိုရီးယား မင်းသား လီဗျောင်ဟွန်း နဲ့ မင်းသားကြီး Choi Min‑sik တို့အဓိကအားပြိုင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့
Crime, Drama, Horror အမျိုးအစားဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
IMDb Rating(7.8/10) နဲ့ Rotten Tomatoes (80%) တောင်ရရှိထားတဲ့ နာမည်ကြီးကိုရီးယားဇာတ်ကားပါ။
Special Agent တယောက် –
လက်ထပ်တော့မယ် သူ့ချစ်သူ ကို ရက်ရက်စက်စက် တစစီခုတ်ထစ်စွန့်ပစ်ထားတာကို မြင်ခဲ့ပြီးနောက် –
ချစ်သူရဲ့ အဖေ က ရဲအရာရှိ –
သူ့သမီးကို သတ်သွားတဲ့သူကို မင်း ရအောင်သာရှာ …. ငါ ဘာလုပ်ပေးရ ပေးရ –
Special Agent ဟာ ၂ ပါတ်တိတိ ခွင့်ယူပြီး –
မသင်္ကာစရာ လူ ၄ ယောက်ကို တယောက်ချင်းစီ စစ်ရင်းမှ လူသတ်သမားအစစ် ကို တွေ့တဲ့အခါ ဘယ်လိုတွေ ကလဲ့စားချေမယ်ဆိုတာ –
အချိန် ၁၄ ရက်အတွင်းမှာ ဘယ်လောက်ထိရက်စက်မယ်ဆိုတာ– – – – – –
တစ်ခုတော့ရှိတယ်.. Family Show မရပါဘူးခင်ဗျ.. သွေးသံရဲရဲတွေ ၊
စိတ်ခြောက်ခြားစရာအခန်းတွေ ပါတာကြောင့် ကြောက်တတ်ရင် မကြည့်ပါနဲ့ …
(မြန်မာစာတန်းထိုးကိုတော့ Kyaw Swar Win မှကိုယ်တိုင်ဘာသာပြန်တင်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။)
FULL MOVIE ကိုအောက်ပါလင့်တွင် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
အခုတလော အွန်လိုင်းတွင် နာမည်ကြီးနေသာ "ဖား"သည်မသား ဇာတ်ကား ( နေထက်လင်း +နေမင်းခ )
Posted by okkala net at 5:58 AM No comments: Links to this post
Director: Joshua Michael Stern ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပြီး
August 15, 2013 မှာ ရုံတင်ခဲ့တဲ့ Apple ရဲ့ ဖခင်ကြီး Steve Jobs ရဲ့
ကိုယ်ရေး အတ္တူပတိ ရုပ်ရှင် ဇတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်...
Jobs ဟာ ဒီလိုအောင်မြင်ဖို့ အတွက် Mac Os အသုံးပြုတဲ့ Apple Computer ကို စတင်တီထွင် ဖို့
အသုံးပြုခဲ့တာ စက်ရုံတစ်ခု မဟုတ်ပဲ ကားဂိုဒေါင် ကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာ စတင်ခဲ့တာပါ
ရှုံးနိမ့်မှုတွေ လဲ အကြိမ်ကြိမ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် Apple Co.Ltd ကို သူများကို ပေးလိုက်ရပြီး Founder အဖြစ်ကနေ
ဒါပေမယ့် ရှုံးနိမ့်လဲ လဲမကျတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ ဆန်းသစ်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့
အကောင်းဆုံးဆိုတာကိုသာ ပေးချင်တဲ့ စိတ်တွေကြောင်း ယခု Jobs မရှိတော့ပေမယ့်
Apple ကို ချစ်တဲ့ သူတွေနဲ့ အောင်မြင်မှု သရဖူဆောင်းနေလျက်ပါပဲ...
ဒီရုပ်ရှင်က Jobs ရဲ့ အကြောင်းကို ခရေစေ့တွင်းကျ ပြောမပြနိုင်ပေမယ့်
တစ်စေ့တစ်စောင်းတော့ သိလာမှာပါလို့ မှတ်ချက်ပြုရင်း....Credit to Channel Myanmar
IMDb မှာ Ratings: 8.4/10 အထိရထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်သလို Super Hero တွေကို
အခုမှ ရုံတင်ကာစမို့ CAM အဆင့်တွေထဲကနေ
အကြည်ဆုံးရှာပြီး HDCAM အဆင့်နဲ့
pCloud ကနေ တင်ပေးထားပါတယ်
Posted by okkala net at 10:59 PM No comments: Links to this post
Skin Trade (2014)မြန်မာစာတန်းထိုးဒီဇာတ်ကားကတော့ တောင်းဆိုထားကြသူ
တော်တော်လေးများတဲ့ Action, Drama, Thriller
အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ထိုင်းမင်းသားTony Jaa နဲ့
Dolph Lundgren တို့ ရဲ့ဇာတ်ကားသစ်လေးပါ..
လူငယ်တွေ လည်းလက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ...
pCloud ကရော Vidzi.tv ကနေပါ ၂ နေရာ တင်ပေးထားပါတယ်..
Credit to ချမ်းငြိမ်း
Director: Jamie Babbit ရိုက်ကူးတက်ဆင်ထားပြီး
July 26, 2013 (USA) မှာ ရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ ရှုပ်ထွေးပွေလီလှတဲ့
မိသားစု ဆန်ဆန် လှည့်ကွက်မျိုးစုံပါဝင်တဲ့ အချစ်ဇတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လို့လဲပြောလို့ရပါတယ်...
ဆာရာ ဟာ ဥပဒေ ကျောင်းသူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဘီယာဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ညဆိုင်းအလုပ်လုပ်ရင်း
တစ်ရက် ဆာရာ ကြိုက်နေတဲ့ ကောင်လေး အဲရစ် ရဲ့ ချစ်သူဟာ ဆာရာ ရဲ့ သူဌေးကို
ချောက်တွန်းလို့ ဆာရာ အလုပ်ပြုတ်တဲ့အချိန် ဆိုင်မှာ ဘီယာလာသောက်တဲ့
အမေသေပြီး အမွေရထားတဲ့ ကုတ်ကမြင်း သူဌေးသမီး အဲလစ် နဲ့ စတင်တွေ့ရှိပြီး
အဲလစ် အိမ်ရောက်သွားရာကနေ အဲလစ် ရဲ့ လိင်တူဆက်ဆံဖော်ချစ်သူ အဖြစ် အတူတူ
အဲလစ် ဟာ ဆာရာ သူမ အနားကနေ ထွက်ခွာမသွားအောင် အမျိုးမျိုးမက်လုံးတွေ ပေးရင်း
ဆာရာ အား ဒုက္ခပေးနေသူများကိုလဲ သူမ က လိုက်လံရှင်းလင်းပေးတက်ပါတယ်
ဒီလို နဲ့ အတူတူ နေလာရင်း ဆာရာ ရဲ့ ရန်ဘက်တွေ သေဆုံးရာကနေ
ရဲတွေ အမှုလိုက်လံဖော်ထုတ်ရင်း အဲလစ် က ဆာရာအပေါ် အမှုတွေ ပုံချဖို့
ကြိုးစားရင်း အဲလစ်ရဲ့ မိထွေး ကိုလဲ သတ်ဖြတ်ရန် အတူကြိုးပမ်းလျက် ရှိကြသော အခါ....
ဇတ်လမ်း တစ်ခုလုံးမှာ ကိလေသာ ဖုံးလွှမ်းတဲ့ အနမ်းတွေ အထိအတွေ့တွေ
လိင်တူချင်းတက်မက်မှုတွေ နဲ့ ပြည့်နေပေမယ့်လဲ ဇတ်လမ်းသွားတစ်ခုလုံးဟာ
လှည့်ကွက်တွေနဲ့ တန်ဆန်ဆင်သွားတယ်ဆိုတာ ကြည့်ရှုရင်းနဲ့ သိသာလာမှာပါ
ဒီကားကို 18+ Adult List ထဲ ထည့်ထားတာမို့ အိမ်မှာ မိသားစုနှင့် အတူမကြည့်သင့်သော ဇတ်လမ်းရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်...
ဇတ်လမ်းကြာမြင့်ချိန် ၁ နာရီခွဲခန့် ရှိပြီး ရုပ်ထွက်အကြည် မြန်မာစာတန်းထိုး အမှန်ဖြစ်ပါတယ်...
Posted by okkala net at 10:39 PM No comments: Links to this post
29 March 2013 မှာ ထွက်ရှိထားတဲ့ သိပ္ပံ ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပါတယ်...
Adventure | Romance | Sci-Fi ဖြစ်ပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ် ရုပ်ရှင်ကားပါ။
ဇတ်လမ်း ပုံစံကတော့ ဂြိုလ်သားများသည် ကမ္ဘာပေါ်ကိုရောက်ရှိလာပြီး
လူသားများ ရဲ့ ကိုယ်တွင်း သို့ ၀င်ရောက်ကာ နေရာ ယူနေထိုင်လျက်ရှိပြီး
လူသားမှန်သမျှကို လိုက်လံရှာဖွေကာ ၄င်းသို့ ရဲ့ ၀ိဥာဉ်များကိုထုတ်ပြီး
ကိုယ်အတွင်းသို့ ၄င်း ဂြိုလ်သားများ၏ မိသားစုများကို ပြန်လည်အသက်သွင်း
နေထိုင်ကြပါတယ် လူသားများကတော့ တောတောင်များကြား ပုန်းခိုရှောင်ပြေး
မြို့ထဲသို့ ဆေးဝါးပစ္စည်းရှာရန် လာသော မယ်လနီ တစ်ယောက်
လူအယောင် ဂြိုလ်သားများ ရဲ့ တိုက်ခံဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် သတိလစ်
မေ့မျှောသွားရာ ဂြိုလ်သားများမှ ၀မ်းဒါး ဆိုသော ဂြိုလ်သား မိန်းမငယ်ကို
မယ်လနီ ရဲ့ ကိုယ်တွင်းသို့ ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါတယ်...
ဒါပေမယ့် မယ်လနီ မှာ လုံးလုံးသေသွားခြင်းမရှိပဲ သူမ ရဲ့ အိမ်တွင်
ကျန်ခဲ့ရှာသော မောင်ငယ်လေးကို စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြင့် ကိုယ်တွင်းဝင်ရောက်နေ
သော ၀မ်းဒါး အား အကူအညီတောင်းကာ ၄င်း နေထိုင်ရာ ပုန်းခိုရာသို့
ပြန်လည် ရောက်ရှိသွားသော အခါ .....
ကြာမြင့်ချိန် ၂ နာရီနီးပါးရှိပြီး စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ဒရာမာ သိပ္ပံဇတ်လမ်းတွဲ
ကြည့်ရှုလိုပါက အောက်ပါ Link တွင် Download ဆွဲ ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Posted by okkala net at 10:34 PM No comments: Links to this post
ဧပြီလ (၁၁) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ Gandarmar Whole Sales Center မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ April Queen & The First Myanmar Cool Guy III မော်ဒယ်ပြိုင်ပွဲ
အဟုတ်မှတ်လို့ ကြည့်နေတာ သေရော...ဒါနဲ့ ဘာမြင်လိုက်လဲဟင်
Posted by okkala net at 8:53 PM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 8:50 PM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 8:47 PM4comments: Links to this post
ဧပြီလ (၁၄) ရက်နေ့ ၊ မဟာသင်္ကြန်အကျနေ့ ရန်ကုန်၊ လေးထောင့်ကန်လမ်းမပေါ်ရှိ POLO CLUB ရေကစား မဏ္ဏပ် မြင်ကွင်း
Posted by okkala net at 9:19 PM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 9:12 PM No comments: Links to this post
ဧပြီလ (၁၃) ရက်နေ့၊ မဟာသင်္ကြန်အကြို့နေ့၊ ရန်ကုန်ရှိ G-Shock သင်္ကြန်မဏ္ဏပ် ဖွင့်ပွဲ နှင့် ဖျော်ဖြေပွဲ
Posted by okkala net at 9:11 PM No comments: Links to this post
ဧပြီလ (၁၀) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ ကန်တော်ကြီး မျှော်စင်ကျွန်းမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့ မွေးနေ့ ဖျော်ဖြေပွဲ APIRL 10 SHOW
Posted by okkala net at 4:10 AM No comments: Links to this post
ဧပြီလ (၁၄) ရက်နေ့ ၊ မဟာသင်္ကြန်အကျနေ့ ရန်ကုန်၊ ကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်ရှိ Grand Royal ရေကစား မဏ္ဏပ်မှ Iron Cross အဖွဲ့ရဲ့ ဖျော်ဖြေမှု မြင်ကွင်း
Posted by okkala net at 4:04 AM No comments: Links to this post
ကြွက်စားဖိုမှူးလေးအကြောင်းပါ....အနံ့ ခံအလွန်ကောင်းတဲ့ ကြွက်ကလေးက
စိတ်ဝင်စားဖို့ လဲကောင်းတယ် ရယ်လဲရယ်ရတယ်...
Posted by okkala net at 3:25 AM No comments: Links to this post
ဒီဇာတ်ကားကတော့ ရုံတင်ကတည်းက အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ ထိုင်းအချစ်ဟာသဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လဲ နှစ်သက်မိတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ်တိုင်ပဲဘာသာပြန်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းကတော့ အင်္ဂလိပ်သင်ယူဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာဆရာမလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတာပါ။
ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေအားလုံးပီပြင်ကြပြီး ဟာသရသမြောက်အောင် သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်။ တကယ်ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ်ကြည့်ရမယ့်ဇာတ်ကားပါ။
တစ်နေ့တာ ပင်ပန်းမှုတွေကို ဒီဇာတ်ကားနဲ့ အပန်းဖြေနိုင်ပါတယ်။
ဇာတ်ကားရဲ့ အဆုံးမှာ Bonus သီချင်းတွေထည့်ပေးထားပါတယ်...အဆုံးထိကြည့်ကြည့်ပါ။
အောက်ပါလင့်တွင် အားရပါးရ ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးသား ဖိုင်ကို OKKALA အင်တာနက်ဆိုင်ရှိ အသစ်ထွက် Movie ဇာတ်ကားများ Folder ထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 3:13 AM No comments: Links to this post
EXO Fan များအတွက် အသစ်ထွက်ရှိလာသော_CALL ME BABY (叫我)_Music Video
GIRLS' GENERATION ရဲ့ သီချင်းသစ်လေးပါ_Catch Me If You Can_Music Video (Korean ver.)
Posted by okkala net at 9:52 PM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 1:18 AM No comments: Links to this post
Cinderella (2015) - အခုလက်ရှိရုံတင်ပြသနေသော စင်ဒရဲလား Version အသစ်ဇာတ်ကားကြီး
Posted by okkala net at 2:50 AM 1 comment: Links to this post
ဧပြီလ (၄) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ Myanmar Event Park မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကိုးရီးယား အမျိုးသမီး တေးသံရှင်အဖွဲ့ 4Minute ရဲ့ "2015 4Minute Fan Bash Live In Myanmar" ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ
Posted by okkala net at 2:47 AM No comments: Links to this post
ကမ္ဘာ့ဝင်ငွေ အကောင်းဆုံး Fast & Furious7Full Movie
Full Movie ကို Okkala internet အသစ်ထွက် Movie ဇာတ်ကားများ Folder ထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 3:43 AM No comments: Links to this post
2014 - 2015 တစ်နှစ်အတွင်း Youtube တွင် လူကြည့်အများဆုံး အကြိုက်ဆုံး
MTV Music Award ရထားသော သီချင်း 31 ပုဒ်ကို သီချင်းချစ်သူ
ပရိတ်သက်များ ကြည့်ရှု၍ ရစေရန် HD Version ဖြင့် တင်ပေးလိုက်ပါသည်။
Cahoots - No Money (feat. Roomie) [Official Behind The Scenes - YTMAs]
Charli XCX Famous ​[Official Behind the Scenes­ YTMAs]
Ed Sheeran & Rudimental­ Bloodstream [Official Music Video­ YTMAs]
Kygo - Stole The Show feat. Parson James [Official Behind the Scenes - YTMAs]
Lindsey Stirling - Take Flight [Official Behind The Scenes-YTMAs]
Lindsey Stirling - Take Flight [Official Behind The Scenes-YTMAs].mp4
Martin Garrix feat. Usher - Don t Look Down [Official Music Video YTMAs]
MAX - Gibberish (feat. Hoodie Allen) [Official Behind the Scenes - YTMAs]
​Megan Nicole ­ Escape [Official Behind the Scenes­ YTMAs]
M​igos ­- One Time [Official Behind the Scenes­ YTMAs]
Shamir­ - Call It Off (Official Behind The Scenes Teaser)
Posted by okkala net at 4:28 AM No comments: Links to this post
‪‎ပြည်‬မှာ ဂတုံးတစ်ယောက် ( ဟာသ သီချင်းလေးပါ အားလုံးကြိုက်မယ် ထင်လို့ တင်လိုက်ပါတယ် ) :D
Posted by okkala net at 6:03 AM No comments: Links to this post
မာယာပရောဂျက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ( နေတိုး + သက်မွန်မြင့် + ဖွေးဖွေး )
Posted by okkala net at 5:52 AM No comments: Links to this post
ညီ ညီ မင်း ခ လ ဘက် ရည် ဆိုင် ထဲ ၀င် တာ နဲ့ဆိုင် ထောင့်စား ပွဲ မှာ ထိုင် နေ တဲ့ဖေ ၀င်း မောင် ကို တွေ့လိုက်သည်..။ ”ဗိုက် ဆာ နေ ပြီ လား ကွ...” “မ ဆာ သေး ပါ ဘူး....ဆ ရာ.” ”ဒိုး တော့ ...အေး အေး ဆေး ဆေး သာ သွား ၀ါး.. ဖေ ၀င်း မောင်..အ ပြန် ကျ ရင် ဟို ဘက် လမ်း ထိပ် က ကျော် ကြီး ကို ချိန်း ပေး လိုက်....ကိုယ် ဒီ မှာ ဘဲ ရှိ မယ်..အ ရေး ကြီး ရင် ဖုန်း ခေါ် လိုက်..” ”ဟုတ် ပြီ..ဆ ရာ...” အ နား ရပ် စောင့်နေ တဲ့စား ပွဲ ထိုး လေး ကို လ ဘက် ရေ မှာ ဖို့လုပ် ပြီး မှ နေ့လည် စာ အ ချိန် ရောက် နေ တာ သ တိ ရ ပြီး မြေ အိုး မြီး ရှည် မှာ လိုက် သည်..။ ဆိုင် အ ပြင် ဖက် ကို မျက် နှာ ပေး ပြီး ထိုင် သည်..။ ဆိုင် ရဲ့မျက် နှာ ချင်း ဆိုင် မှာ ရှိ တဲ့၆ ထပ် တိုက် ပေါ် တက် တဲ့လှေ ခါး ပေါက် ကို မျက် ခြေ မ ပြတ် ကြည့်ရ တဲ့ဖေ ၀င်း မောင် ရဲ့အ လုပ် ကို သူ ထ မင်း စား သွား တုံး ခ ဏ ၀င် တာ ၀န် ယူ ပေး ဖို့ပါ..။ေ၇ာက် လာ တဲ့မြေ အိုး မြီး ရှည် ကို စား လိုက် သည်..။ စား ပွဲ ပေါ် ချ ထား တဲ့ညီ ညီ့ဖုန်း မြည် လာ သည်..။ ကော် လာ အိုင် ဒီ ကို ကြည့်လိုက် တော့ဟန် တင်..။ ကျောက် မြောင်း ဖက် မှာ တာ ၀န် ချ ထား တဲ့သူ့လူ တ ယောက်..။ ”အေး...ဟန် တင်...ဘာ အ ရေး ကြီး လဲ...ဘာ ထူး လဲ...“ ”ထူး တယ် ဆ ရာ ညီ......ပစ် မှတ် က မျက် နှာ သစ် တွေ သုံး နေ တယ် လို့သ တင်း တ ခု တက် လာ တယ်.....ကျနော် ဒီ ဖက် မှာ အ ပိုင် စောင့်နေ တယ်....ဗိုလ် မိုး နဲ့ပိ စိ လဲ ရှိ တယ်..”
Posted by okkala net at 5:40 AM 1 comment: Links to this post
ဧပြီလ (၃) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ Taw Win Garden Hotel မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကိုးရီးယား အမျိုးသမီး တေးသံရှင်အဖွဲ့ 4Minute ရဲ့ "2015 4Minute Fan Bash Live In Myanmar" ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ စာနယ်ဇင်း မိတ်ဆက်ပွဲ
Posted by okkala net at 5:17 AM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 2:03 AM No comments: Links to this post
ဘုတ်ဆုံရဲ့လင်ဒေါ်ကျင်ရဲ့သမက်ဘခက်ရဲ့ယောက်ဖ ပြေတီဦး စိုးမြတ်သူဇာ မိုးဟေကို ခင်လှိုင်